Energy Finance & Investment News in Zimbabwe | Energy finance & investment
Energy Finance & Investment News in Zimbabwe
Uhuru Energy secures US$51 M for 310MW solar plant in Zimbabwe
Independent Power Producer (IPP), Uhuru Energy, has obtained US$51 million from an unnamed Chinese State-owned firm for the first phase of its 310 MW solar photovoltaic (PV) project in Zimbabwe.
Sunco Power seeks financing for 20 MW solar project in Zimbabwe
Sunco Power Co Pvt Ltd, a Zimbabwe-registered start-up, is looking to obtain financing for a 20 MW solar PV park to be constructed in the south of Zimbabwe.
Sunbird Bioenergy signs agreement for bioethanol plant in Zimbabwe
China New Energy Limited (CNE) has announced that Sunbird Bioenergy Limited, its project partner in Africa, has signed an agreement with the Republic of Zimbabwe to develop a 120 million litre cassava to bioethanol plant in the Machonaland Central Province of the country.
Winners announced for Zimbabwe solar projects
Oct 19, 2015
According to sources, Zimbabwe's State Procurement Board (SPB) has finally awarded tenders for solar power projects with a combined output of 300 MW to three firms.
Norton Rose Fulbright is appointed international legal counsel on South African interconnector project
May 29, 2015
Norton Rose Fulbright, is advising the Southern African Power Pool (SAPP) on the development of the regional interconnector transmission line between Mozambique, Zimbabwe and South Africa (MoZiSA).
Standard Bank to loan for Zimbabwe’s hydro project
Oct 22, 2014
Zimbabwe Power Company (ZPC) and NamPower, Namibia’s power utility, have signed a US$150 million power purchase agreement to secure finance for the expansion of Kariba South Hydropower Station project.
Stanbic Bank to provide US$160m loan for the expansion of the Kariba South hydropower project
Oct 16, 2014
Stanbic Bank South Africa will provide an US$160 million loan to Zimbabwe Power Company (ZPC) for the expansion of Kariba South Hydropower Station project.